Madaxweyne Siilaanyo oo Hambalyo U Diray Shaqaale-weynaha Somaliland. |
Madaxweyne Siilaanyo oo Hambalyo U Diray Shaqaale-weynaha Somaliland.
Hargeisa(GNN):-Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane. Axmed Maxamed Siilaanyo, wuxu hambalyo iyo boogaadin u dirayaa shaqalaha Aduunka, gaar ahaan shaqaale waynaha Somaliland, munaasibada 01-May, Maalinat shaqaalaha adduunka awgeed.
Madaxweynuhu waxa uu shaqaale waynaha Somaliland rag
iyo dumarba u rajeeyey inay xuskan xuskiisa ku gaadhaan, bash-bash iyo barwaaqo, isagoo ku booriyey inay halkaa ka sii wadaan waajibaadka ay ugu xilsaaran yihiin dalkooda iyo dalkooda oo ah shaqada ay u hayaan ummadooda.
Ururka Solja Oo War-saxaafadeed Ugu Jawaabay Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.